🥇 ▷ Sida loo tirtiro farriimaha WhatsApp-ka ✅
Sida loo tirtiro farriimaha WhatsApp-ka
Haddii aadan weli aqoon, waad awoodaa tirtir fariimaha WhatsApp hadaad ka qoomamayso wixii aad sheegtay ama aad khaladaad wadahadal ah sameysay. Waa hawl soo gaadhay bilo kahor kahor taas oo ogolaanaysa in farriinta laga tirtiro wada hadalka qofka kalena uusan helin inuu akhriyo. Laakiin waa inaad raacdaa dhowr tillaabo oo aad shuruudaha qaarkood la kulanto.
Waad tirtiri kartaa farriimaha WhatsApp-ka si uusan qofna ugu aqrin khalad haddii aad qalad ku sameysay wada hadalka ama haddii aad go’aansatay inaad ka qoomameyso waxaad u oran laheyd qofkaas. Waa inaad sameysaa ka hor inta uusan qofka kale aqrin isla markaana markasta oofiyo waqtiga kama dambeysta ah ee WhatsApp uu ku siinayo inaad tirtirto fariinta la diray.
Way fududahay oo aad u faa’iido badan. Kaliya waa inaad tagto wadahadalka su’aasha oo riix oo hayso farriinta aad rabto inaad dirto. Astaamo kala duwan ayaa si toos ah uga soo muuqan doona barta hawsha, sida muujinta, jawaab celinta ama gudbinta. Laakiin sidoo kale waad arki doontaa sumadda qashinka. Guji badhan qashinka qashinka si loo tirtiro fariinta loo diray WhatsApp. Codsiga ayaa ku weydiin doona haddii aad rabto inaad tirtirto naftaada ama aad u tirtirto qof walba. Ka taxaddar markii aad xulato xulashada maxaa yeelay haddii aad dhajiso “tirtir aniga” markaa ma awoodi doontid inaad baabi’iso.
Marka WhatsApp ku tuso xulashooyinka, guji “Tirtir dhammaan” Wixii aad qortayna way dhammaan doonaan. Dabcan, waxay shaqeyn doontaa oo keliya haddii fariinta loo diray saacad ama wax kayar saacad ka hor. Ma awoodi doontid inaad tirtirto fariimaha WhatsApp laba maalmood ama seddex ama bil ka hor. Waxaad haysan doontaa hal saac oo aad ku go’aansato.
Raadinta farriinta way sii jiri doontaa. Waxay u baaba’aysaa sidii wax kale laakiin farriinta ayaa u muuqan doonta sida “Fariintaas waa la tirtiray” qofka kale wuu ogaan doonaa inaad tirtirtay. Waxaan ku weydiin karaa sababta oo ay tahay inaad raadsato cudurdaar wanaagsan laakiin ugu yaraan fariintaada lama aqrin doono haddii aad qaldan tahay ama aadan dooneynin.
Mabda ‘ahaan, waad tirtiri kartaa fariimaha uusan qofka kale aqrin. Laakiin ficil ahaan maahan sidaas oo waxaad tirtiri kartaa farriin kasta oo daqiiqada ugu dambeysa haddii aadan rabin in lagu duubto ama haddii aad si fudud uga qoomameysay.
Maxaa dhacaya haddii aan doonayo inaan akhriyo farriimaha la tirtiray?
Waxaa jira xeelado qaar ka akhriso fariimaha tirtirka ah ee WhatsApp-ka iyo qaar ka mid ah codsiyada khaaska ah ee kuu oggolaanaya inaad sidaas sameyso. Halkan waxaa ku yaal ikhtiyaar si aad u aqrisid fariimaha tirtirey WhatsApp-ka adiga oo la xiriiraya xiriirkaaga. Ka taxaddar codsiyada ballanqaada mucjisooyinka WhatsApp maadaama ay noqon karaan khayaano waxaadna ku rakibi doontaa khawano taleefankaaga moobiilka. Markaa, u tag Adeegga Taleefoonka sida ugu dhaqsaha badan si aad ugu soo celiso xaaladaada caadiga ah ee aan fayraskaaga ku jirin taleefankaaga casriga ah.